Dhismooyinka jirka waa degel loogu talo galay macluumaad. Waxaan nahay horseedka qaybiyaha jumladaha dawooyinka cilmi baarista ee Yurub, Australia, Mareykanka, iyo inbadan. Waxaan kaa caawineynaa inaad sameysid go'aano caqli gal ah oo laxiriira nafaqeynta jirka iyo nafaqada isboortiga si aad qiimo fiican ugaqaato jimicsigaaga culus iyo kulamada wadnaha.
Ku taageer sharcigaaga, cilmi baaristaada caafimaad tan ugufiican tayada nafaqada leh iyo xoojiyeyaasha testosterone. Waa inaad had iyo jeer xasuusataa inaad u isticmaasho alaabteena kaliya ujeedooyin sharci ah iyo cilmi baaris illaa iyo inta ugu fiican ee loogu talagalay xoogagga cayaaraha iyo jir-dhiseyaashu ay ka walwalsan yihiin.
Fadlan ogow inaanan aqbalin wax masuuliyad ah, waxkastoo, wixii dhib ah ee ku dhaca qof, si toos ah ama si dadban, adoo galaya degelkeena ama ku tiirsanaanta talo, alaab, iyo adeegyadeena Macluumaadka lagu bixiyo websaydhka looma qaadan karo go'aanka ugu dambeeya, talo, ama ra'yi. Waxyaabaha ku jira degelkan (iyo bogag kasta oo ku xiran boggan) waxaa kaliya loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad iyo adeegsadayaasha goobta iyo booqdayaashu waa inay xaqiijiyaan ansaxnimadooda iyo runtooda ka hor inta aysan ku dhaqaaqin ama ku tiirsaneyn.
Qof kasta oo gala marinka websaydhkan wuxuu sii deynayaa adeeggan iyo dhammaan milkiilayaasha boggan, hawlwadeennada, shaqaalaha & shaqaalaha, si toos ah ama si aan toos ahayn, mid kasta iyo dhammaan deyn kasta oo la xiriirta adeegsiga macluumaadka la bixiyay oo aad ogolaatay inaad haysato milkiilayaasha, daabacayaasha, maamulka, qorayaasha, kafaala qaadayaasha, xayeysiiyaasha, iyo shaqaalaha shirkadeena oo ka madax banaan wax kasta iyo masuuliyad madani ah ama ciqaabeed.
Qof kasta, helitaanka, booqashada, ama ku tiirsanaanta barta ayaa sii daayay oo ka saaray bixiyeyaasha, milkiileyaasha iyo hal abuurayaasha boggan dhammaan wixii mas'uuliyad ah ee ka dhalan kara oo akhriyey oo oggolaaday siyaasaddeenna gaarka ah. Xuquuq kasta oo aan si cad loogu siinin halkan waa la keydiyay oo macluumaadkan waa la tafatiri karaa ama la tirtiri karaa wakhti kasta ogeysiis la'aan.